Nhau - Kunzwisisa musiyano uripo pakati pealuminium board nePCB
Kunzwisisa musiyano uripo pakati pealuminium bhodhi nePCB
Chii chinonzi aluminium board
Aluminium bhodhi imhando yesimbi yakavakirwa yemhangura yakapfeka bhodhi ine yakanaka kupisa kupisa basa. Kazhinji, imwe chete pani inoumbwa nematanda matatu, ayo ari wedunhu rukoko (mhangura foil), kuputira rukoko uye yesimbi base rukoko. Izvo zvakajairika mune zvigadzirwa zvemwenje zveLED. Kune mativi maviri, rimwe divi rewhite rakasungwa pini yakatungamirwa, rimwe divi ialuminium kara, kazhinji ichave yakaputirwa nekupisa conduction pasita uye kusangana neye kupisa conduction chikamu. Kune zvakare zvedongo bhodhi uye zvichingodaro.
Chii chinonzi PCB
Pcb bhodhi kazhinji inoreva yakadhindwa redunhu bhodhi. Pcb (pcb bhodhi), inozivikanwawo sePCB, ndiyo inopa magetsi ekubatanidza kwezvinhu zvemagetsi. Yakave ichivandudza kweanopfuura makore zana; Dhizaini yayo iri kunyanya dhizaini dhizaini; Iyo huru mukana wekushandisa wedunhu bhodhi kudzikamisa kukanganisa kweiyo wiring uye kuungana zvakanyanya, uye kugadzirisa iyo otomatiki nhanho uye yekugadzira yevashandi chiyero
Zvinoenderana nenhamba yematanho emabhodhi edunhu, inogona kukamurwa kuita rimwe chete jira, maviri-mativi bhodhi, mana-dura bhodhi, nhanhatu-nhete bhodhi uye mamwe multilayer wedunhu mabhodhi. Sezvo rakadhindwa redunhu bhodhi isiri yakajairwa yekupedzisira chigadzirwa, it is a little confused in the definition of name. Semuenzaniso, iyo mamaboard yekombuta yemunhu inonzi mamaboardboard, asi kwete zvakananga kunzi redunhu bhodhi. Kunyangwe paine mabhodhi ematunhu mubhodhi huru, haina kufanana, saka hazvidi kuti utaure zvakafanana pakuongorora indasitiri. Semuenzaniso, nekuti kune zvikamu zveIC zvakatakurwa pabhodhi redunhu, venhau venhau vanomuti IC board, asi kutaura zvazviri, haana kuenzana neakadhindwa wedunhu bhodhi. Isu tinowanzo tarisa kune rakadhindwa redunhu bhodhi seisina bhodhi - ndokuti, redunhu bhodhi isina yepamusoro chinhu.
Musiyano uripo aruminiyamu bhodhi uye pcb bhodhi
Kune vamwe vadiki vanobatirana vachangopinda muindasitiri bhodhi indasitiri, panogara paine mubvunzo wakadai. Ndokunge, ndeupi musiyano uripo pakati pealuminium board uye pcb board. Pamubvunzo uyu, chikamu chinotevera chinokuudza chaizvo mutsauko uripo pakati pezviviri?
Pcb bhodhi uye aruminiyamu bhodhi zvakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa pcb. Parizvino, iyo aluminium yakavakirwa pcb bhodhi mumusika inowanzo kuve isina-mativi aruminiyamu bhodhi. Pcb bhodhi irudzi rukuru, aruminiyamu bhodhi ingori imwe chete mhando pcb bhodhi, iri aruminiyamu based simbi ndiro. Nekuda kweiyo yakanaka yekupisa conductivity, inowanzo shandiswa mu LED indasitiri.
Pcb bhodhi anowanzo ari emhangura bhodhi, iro zvakare rakakamurwa rimwe pani uye kaviri-mativi bhodhi. Izvo zvinhu zvinoshandiswa pakati pezviviri mutsauko uri pachena. Huru zvinhu aruminiyamu bhodhi iri aruminiyamu ndiro, uye chikuru zvinhu pcb bhodhi mhangura. Aluminium bhodhi yakakosha kune yayo PP zvinhu. Kupisa kupisa kwakanyanya kunaka. Mutengo wacho unodhurawo
Zvichienzaniswa nezviviri mukupisa kupisa, iko kuita kwealuminium bhodhi mukupisa kupisa kwakanyanya kupfuura bhodhi rePCB, uye kupisa kwayo kwakapisa kwakasiyana neiyo yePCBB, uye mutengo wealuminium bhodhi inodhura.